२० करोडभन्दा बढीको चियापान
दशैं, तिहार, छठको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान भनेर सत्तारुढ र प्रतिपक्षले समेत चियापानको आयोजना गरेको देखियो । ५ हजार निम्तो कार्ड बाँडेर गरेको यो तामझाममा २० करोडभन्दा बढी खर्च भएछ । सत्तारुढ नेकपाले गरेको चियापानमा ठूलालाई पेडा र सानालाई चियामा चोपेर केरा खुवाइयो । राज्यकोषको व्यापक दुरुपयोग भएको देखियो ।
तर राज्य सञ्चालक केपी ओली बिमारी परे, टिचिङ अस्पतालमा भर्ना भए र ५ दिनको उपचार खर्च २५ हजार भनेर प्रचार गरियो । हो, उनले स्वदेशमै उपचार गरेर पैसा बचाए होलान् । तर चियापानमा गरेको फजुल खर्चको हिसाव कितावको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले बेहोर्नु पर्ने कि नपर्ने ?
ओली बंशको भेला बालुवाटारमा, नेकपाको बैठक र भेला बालुवाटारमा भएको देखियो । एक दिने टीकाका ठाउँमा पूर्णेसम्म टीका लगाइदिएर प्रधानमन्त्रीले तमासा देखाएको पनि देखियो । सबैले टिप्पणी गरे, टुक्का बाजेले बालुवाटारलाई शर्माजीको पार्टी पालेस नै बनाइदिए । सरकारी निवासमा हिन्दी गीत बजाएर ठुमका लगाएका देखियो । प्रधानमन्त्री निवासमा सधैं भोज, सधैं सेल्फी, वाह ?
जनता चिसोमा छन्, बाढीपहिरो पीडितले राहत पाएका छैनन् । भूकम्पपीडित च्यातिएको त्रिपालमुनी बाँचिरहेका छन् । भोकानाङ्गाको बेहाल भएको देशमा ठूला पार्टीले २० करोडको चियापान गराउने ? यो सुहाउँछ ?
बजारभाउ ३५ प्रतिशत बढेछ । दशैं तिहारको बेलामा फौबञ्जारहरुले लुट्नुसम्म जनतालाई लुटिरहेका छन् । लुट्न दिने सरकार मौन छ । भोजभत्तेरमा रमाइरहेको छ । बाँच्न नसक्नेहरु मरिरहेका छन्, सत्तावादी मजाले बाँचिरहेछन् । यो देश हो कि लखनौं लूट गर्ने थलो ? ठम्याउनै मुस्किल परिरहेको छ ।
राजधानीमा नेकपाले चियापान राख्यो, खर्च राज्यले गर्‍यो । बाँकी प्रदेश, नगर, गाउँ, वडासम्म नेकपाको चियापान चलिरहेको छ । कति खर्च भयो होला, सबै खर्च राज्यकोषबाटै भएको हो । जनताले तिरेको करकै पैसो हो । जनता धुलो र धुवाँ खाएर रोग पालिरहेका छन्, ज्यान फालिरहेका छन् । त्यस्तो असरल्ल देशमा देशव्यापी चियापान । यो चियापान हो कि जनतलाई जिस्क्याएको ?
सरकार नेकपाको छ । नेकपाको सरकारले हरेक मन्त्रालयदेखि गाउँतहसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त पारेको छ । सुशासन र समृद्धि दिने भाषण गर्नेहरुको भ्रष्टाचार र कमिशन मोह देख्दै लाज लाग्छ । देशको समृद्धि र जनताको खुसी भन्दै लुट्ने नेकपाको तरिका खुब रमाइलो छ । जनता मारेर सर्वत पिउने कलामा नेकपाभन्दा पारंगत अरु को होला ? हो, भ्रष्टाचार पुराना शासक, अन्य पार्टीले पनि गरेका थिए, अरुले गरेको कूकर्म नेकपाले पनि गर्ने हो भने भिन्नता के भयो त ?
राम कार्कीजस्ता नेकपाबाट किनारा लागेका अथवा घनश्याम भुसालजस्ता भरुहवातिर लखेटिएका नेतालाई लाज लागेर के गर्ने ? लाज लाग्नुपथ्र्यो, नेकपा हाँक्ने दुई पाइलटलाई । न प्रचण्डलाई लज्जित बनायो, न ओलीलाई ?
स्वास्थय सचिवले लुटिन्, के भयो । सुगत रत्न कंसाकारले हवाई माफिया बनेर लुटे, के गर्न सक्यो । कतै लुटाहका मौसेरा भाइ शासन त चलिरहेको छैन यो देशमा ? अन्यथा यस्तो दुर्गति नहुनु पर्ने हो ।